रक्सी नपाएर मान्छेलाई टोक्ने बाँदरलाई आजीवन जेल सजाय - बडिमालिका खबर
साेमबार, असार २९, २०७७
रक्सी नपाएर मान्छेलाई टोक्ने बाँदरलाई आजीवन जेल सजाय
बिहीबार, असार ४, २०७७
बाँदरलाई जन्मकैद दिइएको कहिल्यै सुन्नुभएको छ ? हो, छिमेकी भारतमा यस्तै भएको छ । कानपुर चिढियाघरमा त्यस्तो बाँदर छ, जो आजीवन जेलमा बस्नेछ ।
कालुवा नामको यस बाँदर मिर्जापुर जिल्लाको रैथाने हो । उसले मिर्जापुरमा टोकेका २ सय ५० व्यक्तिमध्ये एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ । रिपोर्टअनुसार स्थानीय एक जड्याहाले यो बाँदरलाई पालेका थिए र उनले निरन्तर आफूसँगै बाँदरलाई पनि रक्सी खुवाउँथे।
बिस्तारै कालुवा पनि जड्याहा भयो । जब ती जड्याहा मालिक बिते, त्यसपछि रक्सी नपाएर कालुवा आक्रामक भयो । उसले जथाभावी टोक्न थाल्यो र मिर्जापुरमा आतंक फैलायो । त्यसपछि कालुवालाई पक्रनका लागि बन र चिडियाघरको टोली बोलाइयो ।
ठूलो प्रयासपछि कालुवालाई पक्राउ गरेर कानपुर चिडियाघरमा राखिएको समाचारमा जनाइएकाे छ । ‘हामीले पहिले उसलाई केही महिनासम्म आइसोलेसनमा राख्यौं र अहिले अलग खोरमा कैद गरेका छौं । उसको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन देखिएको छैन र ऊ पहिलेजस्तै आक्रामक छ । हामीले उसलाई यहाँ ल्याएको तीन वर्ष भइसकेको छ र अब जीवनभर यहीँ राख्ने निर्णय गरेका छौं,’ चिडियाघरका डाक्टर मोहद नसिरले भने ।
नसिरका अनुसार कालुवा ६ वर्ष भयो र यदी उसलाई स्वतन्त्र छाडियो भने उसले जहाँ भेट्यो त्यही मानिसलाई आक्रमण गर्नेछ । अहिलेसम्म आफ्नो खोर हेर्ने व्यक्तिसँग समेत कालुवा घुलमिल हुन सकेको छैन ।
के तपाईंका सैनिक पनि मारिएका छन् ? चीनले दियो यस्तो जवाफ
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङख्या ४ पुग्यो
बाजुरामा ५८ बर्षिय पुरुष बाट ९ बर्षिय वालिकालाइ बलत्कारको प्रयास
कपडाभित्रको दृश्य समेत खिच्नसक्ने क्यामरा
यस्तो छ सुनले बनेको संसारकै पहिलो पाँचतारे होटल (फोटोफिचर)
विश्वकै कठिन प्रवेश परीक्षा
कुखुराले अण्डा होइन बच्चा नै जन्माएपछि…
पब्जीको लत : किशोरले रित्याइदिए बाउआमाको २७ लाख रुपैयाँ
साँफे मार्तडी सडकको विकल्प बारे अध्ययन शुरु
जब लोक सेवाका अधिकृतले छोरीको उत्तर आफैं लेखिदिए
साँफे मार्तडी सडक अन्तर्गत पुन द्वारीबाटनै खोलीने : प्रजिअ गैह्रे
रोनाल्डोले दुई गोल गर्दा युभेन्टस बराबरीमा रोकियो
सन्दर्भ भानु जयन्ती: भानुभक्तको जन्मकुण्डली विवाद र देहावसान
कोरोना जितेकी स्वास्थ्यकर्मी सिहं भन्छन् :आत्माविश्वास र मनोबलले जस्तो सुकै रोग जित्न सकिन्छ
एकता जिन्दावाद भनौं, नेकपा फुट्दैन : प्रचण्ड
स्थानिय तहमा डोजर आतंक, दर्जनौ गाँउ पहिरोको जोखिममा
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो २४ घण्टामा ६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी
आइएनएफ बाजुराद्धारा राहत बितरण